Pasternak, "मग्दलिनी": वास्तविकता वा मिथक
कला र मनोरंजन, साहित्य
Pasternak गरेको कविता "मग्दलिनी" एक स्वगत, गेय रूपमा उपन्यास "डाक्टर Zhivago" लारा को भाग हो। प्लट ख्रीष्टको पाउमा माझ्छिन् र आफ्नो अन्तिम यात्रामा उसलाई सँगसँगै गर्ने पश्चात्ताप पापी सुसमाचारको पाठको रूपमा सेवा गरे।
यो विचार विकास गर्न मग्दलिनी सुरु हुन्छ। को भर्जिन दुष्ट गर्न रात आउन र उनको मन debauchery को सम्झनाहरु चूसना। दोस्रो stanza को शुरुवात "deathly" यी दर्शनहरू को मौन मा विराम। यो सम्झनाहरु को अन्त छ, वा यसलाई पाप र debauchery जीवन अन्त राख्दछ? दुई तरिकामा यी Pasternak गरेको "मग्दलिनी" को कविता रेखाहरूको अर्थ व्याख्या गर्न सकिएन। तैपनि, आफ्नो मग्दलिनी repents र पाप बस्ने अप दिन्छ: एक चरम पतन पुग्नु, यो मेरो जीवन, खण्डन "को सिलखडी बक्स रूपमा।"
त्यसपछि सबै एक पटक अस्तित्व गर्न भौतिक संसारबाट हस्तान्तरण। पहिलो मग्दलिनी एक थियो भने, यहाँ पहिले नै मुक्तिदाता अघि देखिन्छ। केन्द्रीय stanza मास्टर गर्न सम्बोधन र मुक्तिदाता, हामी उनको आँखा हेर्नुहोस्। मग्दलिनी पछुतो र आत्म-निन्दा संग मिश्रित मात्र यसलाई आफ्नो मुक्तिको मा महसुस। यो हेरोइन Pasternak सँगै विशाल शोक मा, "एक रूख उम्कने", मृत्यु र नरकको जित्न मानिन्छ जो आफ्नो मास्टर संग हुर्केका। केवल अन्तिम stanza मा, त्यो आफ्नो खुट्टा अब उहाँले दफन लागि तयार गर्न सिक्दै छ भन्दै, आफ्नो घुँडामा propped नाम उसलाई कल गर्न निर्णय गर्दछ।
पहिलो stanza गर्दा Marguerite, sobbing, किनभने आँसु को केही देखेर, मुक्तिदाता को खुट्टा, prosaic माझ्छिन्। तर त्यसपछि गेय हेरोइन को दूरदृष्टि हाइट्स गर्न rises। यो Sibyl रूपमा, त्यसैले उनको आन्तरिक आध्यात्मिक शुरुवात aggravated, भविष्यवाणी गर्न सक्षम छ, अहिले छ। र यो Pasternak मग्दलिनी देख्नुहुन्छ? आफ्नो अन्तिम घण्टा र पार, मृत्यु र पुनरुत्थानको मा पृथ्वीमा जीवन, सास्ती को मिनेट। तर संसारको सबै यस्तो बोझबाट योग्य छ भने, आफ्नो काखमा क्रूसमा outstretched येशूले सम्पूर्ण आफ्नो सारा को पकड लिया र सबै प्रदान मुक्ति? क्रस आकाश गर्न भताभुङ्ग हुनेछ, र त्यो त्यहाँ पुनरुत्थानको सम्म बाँच्न छन् जानुहुन्न के छैन बुझेर पनि क्रूसमा एक मा जमीन गर्न हालियो मग्दलिनी।
यहाँ दैनिक जीवन र प्रतीकात्मक सर्तहरू बीच स्पष्ट सीमाहरु आकर्षित गर्न गाह्रो छ। यो उद्देश्य लागि यो आफ्नो वर्ण अस्थायी मा अनन्त refract कि संवादलाई हुन्, आफ्नो संपूर्णता मा उपन्यास विचार गर्न आवश्यक छ। उपन्यास मा मग्दलिनी आवाज येशूले उसलाई सत्य बताएअनुसार धेरै महत्वपूर्ण छ। यो "मग्दलिनी" Pasternak विश्लेषण गर्न सम्भव यसरी छ। तर तपाईं यो फरक आँखा मा हेर्न सक्छन्।
सबैले बी एल Pasternak रूपमा व्यग्र विश्वास गर्छ, र चार उपदेश शब्दहरू पूर्ण सत्य रूपमा कथित छैन। बाटो गरेर, सुसमाचारका धेरै बढी थिए, तर तिनीहरूले apocryphal घोषणा, र घरमा रहेको एकैचोटि शूलीमा पठाइयो। अब तिनीहरू सबै प्रकाशित (Sventsitskaya Irina Sergeevna)। कविता "म्यागडालेना" Pasternak विश्वास र प्रेम imbued। यो सुन्दर छ र poetically एक मिथक conveys। वास्तवमा, येशूको थियो? आफ्नो समय मा धेरै थियो जो गलत मसीह? उहाँले समाज र अशिक्षित को सबै भन्दा कम strata मात्र बाह्र विद्यार्थीहरूको जीवन समयमा संचित थियो। कविता "म्यागडालेना" छ कि एक निर्माता समझ हामीलाई नजिक ल्याउन छैन।
समीक्षा र पुस्तकको समीक्षा "द Amphibian मानिस"
Chipollino प्रेमिका को नाम के थियो? "Chipollino" - मुख्य वर्ण
"मारिया लागि मुद्रा" Rasputin: सारांश। "मारिया लागि मुद्रा": को अध्याय सामग्री
मिखाइल Bulgakov। "एक कुकुर को हृदय।" सारांश र लुकेका अर्थ
"Gynt सहकर्मी" Genrika Ibsena: एक सारांश। अक्षरहरू, प्लट, विषय: "Gynt सहकर्मी"
को "व्यापारी Kalashnikov को गीत" को सारांश: केही unpunished रहिरहन्छ
अन्तर - कि संयन्त्र के र कसरी काम गर्छ?
एएमएलको लागि अद्भुत उपकरण। यो के हो?
को cadastral अदालत मा त्रुटिहरू सुधार। cadastral गल्ती को सुधार को लागि दावी एक नमूना बयान। अवधि सूची त्रुटिहरू फिक्स। cadastral को त्रुटिहरू सुधार को लागि आधार
यस चित्रकला "गाउँ Khmelevka" मा लेखन। कलाकार Nikolay Mihaylovich Romadin
होटल ग्रीस, क्रेते कसरी चयन गर्न
गर्भावस्था मा Acyclovir
के जानकारी हृदयको दैनिक अनुगमन प्रदान गर्दछ?
स्पिन्ड टेप के हो? रोपण र हेरचाह
Selena Gomez सबै चलचित्र
कसरी कागज बाहिर एक बन्दूक चाँडै र सजिलै गर्न
"केल्विन क्लाइन": वर्ण आत्माको
यो बहु-faceted cabbages: प्रजातिहरू, विशेष गरी